ईशा लामिछानेले दिईन रवि लामिछानेबारे यस्तो कडा प्रतिक्रिया (नालीबेलीसहित) « Postpati – News For All
ईशा लामिछानेले दिईन रवि लामिछानेबारे यस्तो कडा प्रतिक्रिया (नालीबेलीसहित)
पढ्न लाग्ने समय : १४ मिनेट
ईशा लामिछाने । आफ्नो निजी जीवनका कुराहरु कुनै दिन सार्वजनिक चर्चाका विषय बन्लान् भन्ने मैले कल्पना नै गरेकी थिइनँ । मैले मिडियामा आउन चाहेकी पनि थिइनँ । म त डिभोर्सपछि चुपचाप अमेरिका फर्किएकी हुँ । तर, रवि लामिछानेजीको स्टाटस र अन्तरवार्ता पढिसकेपछि आफ्नो तर्फबाट केही कुरा प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेकी छु ।
वैवाहिक सम्वन्ध तोडिँदा पुरुषले त सजिलै अर्को घर बसाउन सक्ला, तर महिलाले अनेक लान्छना खेप्नुपर्छ । उसलाई समाजले राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन । छोराछोरीहरुलाई त्यसको असर पर्छ । त्यसैले रविजीबाट वर्षौंंसम्म तिरस्कार झेलेर पनि म हाम्रो सम्वन्धको संरक्षणमा नै दत्तचित्त रहेँ । म सुरुदेखिको कुरा गर्छु । झर्को नमानिदिनुहोला ।
रविजी अमेरिका गएको भोलिपल्ट हाम्रो ल्यान्डलाइन फोनको घन्टी बज्यो । एक अपरिचित केटीले फोन गरेकी थिइन् । ‘ओई, तेरो पोई कहाँ गएको हो भन् ?’ फोन उठाउनासाथ उताबाट चर्को स्वरमा यस्तो आवाज आयो । म झसंग भएँ ।
उस्तै कडा स्वरमा जवाफ दिएँ, ‘जहाँ गए पनि किन चाहियो तँलाई ? को होस तँ ?’ उनले भनिन्, ‘तेरो पोईले मलाई धोका दिएर भाग्यो । उसले मबाट दुईटा सन्तान जन्माएको छ । कहाँ गएको हो ? भनिनस् भने तिमीहरु आमाछोरीलाई किडन्याप गराइदिन्छु ।’ मैले उनको कुरा पत्याइनँ । झ्याप्प फोन राखेँ ।
यिनै कारणले हामीबीच असमझदारी बढ्दै गयो । म पनि उहाँसँग मुखमुखै लाग्न थालेँ । भनेको टेर्न छोडेँ । उसले मलाई श्रीमतीको भ्यालु दिँदैन भने ममात्रै किन लाचार बनिरहने जस्तो लाग्थ्यो । छोरीहरुका अगाडि भने हामी आफ्नो झैंझगडा लुकाउन खोज्थ्यौं । तर, कति दिन लुकाएर साध्य हुन्थ्यो र ! एक दिन हाम्रो ठूलै झगडा भयो । र, उहाँ घरै छोडेर हिँड्नुभयो ।
नेपाल आएको केही दिनमा मलाई अमेरिकामा रविजीको स्टोरमा काम गर्ने एउटी केटीको म्यासेज आयो । ‘तिम्रो श्रीमानले तिमीलाई दुई वर्षदेखि धोका दिइरहेको छ । उ एउटी केटीसँग लिभिङ टुगेदरमा छ र एउटा छोरा पनि भइसकेको छ,’ उनले लेखेकी थिइन् । उनले को केटी हो त्यो भनेर भन्न मानिनन् । मलाई उनको कुरा पत्याउन गाह्रो पर्‍यो ।
(अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)
देशभर थपिए ९१९६ कोरोना संक्रमित, ५० जनाको मृत्यु